Uyifaka njani i-Samsung Galaxy tab kwi-7 ngeKernel Overcome | I-Androidsis
Okokuqala, yithi ndenza le khokelo ngenxa yeengxaki abanye abasebenzisi abanazo xa ukhanyisa isitokhwe se-Gingerbread firmware kunye nengcambu, Ndigqibe ekubeni ndikufundise indlela U kunqoba.
Ngokubanzi le ndlela iyafana nale ingasentla endikubonisa zona, inye kuphela into ekhoyo apha Siza kukhanyisa uKoyisa uKernel. QAPHELA le ndlela isebenza kuphela kwiithebhu zemodeli ze-GSM.
Xa sigqiba inkqubo, siya kuba nayo Ithebhu ye-Samsung Galaxy 7 ″ okanye imodeli p-1000nge Isonka se-Gingerbread ye-Android 2.3.3, nendele kunye naye Ukubuyiselwa kweClockworkmod kufakiwe, apho sinokufaka khona iirom eziguqulweyo zesiphelo sethu.
Yiba ne Ithebhu ye-Samsung Galaxy tab 7 ″ p1000 kunye nebhetri egcwaliswe ngokupheleleyo y ukulungiswa kwe-usb kuvunyelwe kwimenyu yokuseta.
Ngokufanayo Kuya kufuneka sijonge ukuba sinofikelelo oluchanekileyo kwimowudi yokukhuphela kunye neRecoveyUkuqinisekisa oku, siza kucima isixhobo kwaye senze ezi zinto zilandelayo:
Imowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo: IVolumu inyuse iqhosha leMandla, kude kube ngoonobumba be Galaxy Tab, emva koko siza kubakhulula kwaye isikrini esinjengalesi silandelayo kufuneka sivele: (ukuphuma sikhetha inkqubo yokuQala kwakhona)
Imowudi yokukhuphela: IVolumu ezantsi kunye naMandla ngaphandle kokubakhulula de kube ngathi kuvela isikrini:(ukuphuma siza kucinezela kwaye sibambe iqhosha laMandla de licime kwaye liphinde livule)
Kubaluleke kakhulu ukuba ubuncinci I-3GB yendawo yokugcina yangaphakathi yesixhobo.
Into yokuqala esiza kuyenza yile khuphela iifayile eziyimfuneko ukwenza isenzo, ke Siza kukhuphela i-firmware ecocekileyo yeGingerbread kunye Ukoyiswa kweKernel kulungiswe ngeClockworkMod Recovery.
Xa sele ukhutshiwe, siya kuvula unzip naphi na kwidesktop,(ngokukhethekileyo kwifolda entsha), siya kuvula ifolda I-GB-Stock-ekhuselekileyo-v5 kwaye siya kuyenza ifayile SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_x86, ukufaka abaqhubi abafanelekileyo.
Nje ukuba abaqhubi, siza kuyiqala kabusha iPC kwaye siya kuqhubeka ngenyathelo elilandelayo.
Ngoku siza kwenza ivumba le-1.7 engaphakathi kwifolda Odin3_v1.7.
Siza kucofa kwiqhosha PIT kwaye siya kukhetha ifayile gt-p1000_mr.pit ukusuka kwifolda I-GB-Stock-ekhuselekileyo-v5.
Siza kucofa kwiqhosha PDA kwaye siya kukhetha ifayile GB_Stock_Safe_v5.tar.kusuka kwifolda efanayo.
Ngoku kubaluleke kakhulu ukujonga oko ibhokisi yokuHlula kwakhona ihlolwe kwaye sinako cqhagamshela isithuba kwimowudi yokukhuphela kwaye ucofe kwiqhosha lokuqala.
Ngoku, kanye Ithebhu ye-Samsung Galaxy 7 ″, Siza kungena imenyu yezicwangciso kwaye siza kusebenza kwakhona ukususa iibhagi kwi-USB, Siza kuyicima kwakhona kwaye sivule ivumba le-1.7.
Ngoku siza kukhetha ibhokisi PDA kwaye siya kukhangela ifayile Yoyisa_Kernel_v4.0.0, Siza kujonga ukuba ibhokisi Ukwahlula kwakhona akuhloliswanga, NDIPHINDE NDIPHINDE, Ukwahlula kwakhona akufuneki kuhlolwe.
Siza kuvula i tab en Imowudi yokukhuphela kwakhona kwaye ucofe kwiqhosha Qala.
Ngale nto siza kube sikhanyisile ngokuchanekileyo I-Samsung Galaxy tab 7 okanye p-1000 ukuguqulela 2.3.3, isekelwe kunye neClockworkMod Recovery esebenzayo.
Musa ukoyika ukuba isithuba sokuqalisa kwakhona sithatha ixesha elide kunokuba kufanelekile kwaye siqala ukuncokolaukusukela IKernel yenza uguqulo lweefayile.
Ngoku siza kuba kuphela ingcambu ngokucofa iSuperOne.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy tab 7 ″ (p-1000) kwi-Android 4.0, Ungayisusa njani i-terminal yakho ye-Android ngeSuperOneClick
Khuphela - GB_Stock_Safe_v5, Yoyisa iKernel, SuperOneClick
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uyifaka njani kwi-tab ye-Samsung Galaxy 7 ″ ngale ndlela yoyisa
Ndiphendule nje ngento, ngaba ndingayenza le ndlela kwi-P-1000L yam nge-gingerbread 2.3.6?
Le ye-p-1000 kuphela
Uxolo ngokungazi kwam, bendiyiqondile into yokuba i-P-1000L yiLatin American enye, i-P-1000N yeyaseYurophu, kodwa yeyiphi iP-1000?
Ezo zimbini ziimodeli zaseMelika, kwaye i-P1000 yeyaseYurophu
Molo, sele ndiyenzile yonke into eneenkcukacha kodwa ndinengxaki, zizibane zokukhangela kuphela kwi-tab ezivulayo, yi-gt-p1000n, akukho nto kwiscreen, ndenza ntoni? Enkosi
UBosco Ivan sitsho
Ndinengxaki ukuzama ukuvuselela i-galaxy tab ye-GT-P1000N kwi-gingerbread 2.3.
kwaye xa umyalelo we-odin wokusetha kwakhona akukho nto ibonakala kwiscreen
Phendula uBosco Ivan
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ngaba ikhona indlela yokuphucula i-lollipop ngaphandle kwesidingo se-pc. Kuba andikwazi ukudibanisa ithebhulethi nge-USB, enkosi